Manchester United Oo Loo Sheegay In Cavani Ay Ka Saxiixdaan Waqti Kale.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester united oo loo sheegay in Cavani ay ka saxiixdaan waqti kale.
Man Utd ayaa dooneysa in ay sii dheereysato qandaraaska Cavani oo ahaa kaliya waqti koobaan waxaana sababatay qaab ciyaareedka uu kusoo bandhigay garoonka old traford.
Manchester United waa inay sameysaa wax walba oo macquul ah si ay kooxda ugu sii hayaan Edinson Cavani, ayuu yiri Mark Hughes.
Hughes ayaa u sheegay TalkSport xidiga u dhashay wadanka Uruguayan kaasoo ku yimid kooxda Red Devils heshiis hal sano ah sidoo kale waxaa uu ikhtiyaar u leeyahay in qandaraaska loogu daro dheereeyo muddo dheer.
Bandhigyada Cavani ayaa Ka dhigtay in kooxda iyo waregysyadu hadal hayaan wax qabadkiisa mudada yar uu kooxda ku sugan yahay xidigaan ayaa kasoo dhaqaaqay horyaalka faransiiska gaar ahaan PSG.